Mozilla က Amazon Fire TV နှင့် Fire TV Stick များအတွက် Firefox ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် Gadget သတင်း
Mozilla က Amazon Fire TV နှင့် Fire TV Stick များအတွက် Firefox ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Mozilla သည်မကြာသေးမီကအင်တာနက် browser နယ်ပယ်တွင်ထင်ရှားသောရာထူးရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက၏တည်ရှိမှု ကွမ်တမ် Firefox ကို ဖြစ်နိုင်သမျှပလက်ဖောင်းအားလုံးအတွက်အရင်းအမြစ်အနည်းဆုံးကိုစားသုံးနိုင်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, လူကြိုက်များ fox browser ရရှိနိုင်အဖွဲ့များ, ပိုကောင်း။ ၎င်းသည် Mozilla ကိုစဉ်းစားပြီး Amazon media player များ၊ Amazon Fire TV နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်လိမ့်မည် အမေဇုံမီးသတ်တီဗီ Stick.
ဒါ့အပြင်ဒီရွေးချယ်စရာအလွန်ကောင်းသောအချိန်တွင်လာပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Google နှင့် Amazon တို့၏အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိနေပြီး၊ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးများဆုံး streaming video service တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Amazon ကစားသမားနှစ် ဦး စလုံးအတွက် Firefox ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဤအငြင်းပွားမှုများတွင်အထိခိုက်ဆုံးဖြစ်သည့်အဆုံးအသုံးပြုသူသည်ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာကိုဖွင့ ်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, အထူး app ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဆင်ပြေသည်မဟုတ်သော်လည်းအနည်းဆုံး Amazon Fire TV အသုံးပြုသူသည် Google platform မှအကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်သုံးစွဲနိုင် ဦး မည်ဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပဲပြောတာလည်းတရားမျှတပါတယ် Firefox အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခုအချိန်တွင်အမေရိကန်၌သာရနိုင်သည်.
မင်းသိတဲ့အတိုင်း တပ်ဆင်ခြင်းသည်ရိုးရှင်းပြီးနည်းလမ်းနှစ်မျိုးသုံးနိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ၎င်းကိုစက်မှကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်ရှိ dialog box မှ "Firefox" ဟူသောစကားလုံးကိုရှာဖွေရန်သို့မဟုတ်အသံအမိန့်ပေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ယခုသင်အလိုရှိပါက၎င်းကိုကွန်ပြူတာ၊ မိုဘိုင်းစသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အမေဇုံစာမျက်နှာကနေ။ Amazon Fire TV အတွက်ဂိမ်းများနှင့် application များကဏ္theတွင် ဘရောင်ဇာရှာဖွေပါ။ သင်ရှာတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်နက်ညာဘက် menu တွင် "Send to" ကိုသာရွေးပြီးပေါ်လာသည့် Fire TV ကိုသာရွေးရမည်။ ထိုအခါသင်ရုံ၎င်း၏တပ်ဆင်ရန်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ရုပ်ပုံနှင့်အသံ » ကစားသမားများ » Mozilla က Amazon Fire TV နှင့် Fire TV Stick များအတွက် Firefox ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
အကောင်းဆုံး Mid-range စမတ်ဖုန်းများ
အဲရစ်ရှမစ်သည် Alphabet (Google) တွင်စီအီးအိုအဖြစ်ရာထူးမှနုတ်ထွက်လိုက်သည်။